एभोकाडो के हो? तौल नियन्त्रणदेखी छालाको सुन्दरता का लागि - DURBAR TIMES
HomeHealthएभोकाडो के हो? तौल नियन्त्रणदेखी छालाको सुन्दरता का लागि
एजेन्सी | एभोकाडो अर्थात् घ्यूफलमा भिटामिन, क्याल्सियम, आइरन, एन्टी–अक्सीडेन्ट र एन्टी–भाइरल गुणहरू भरपूर हुन्छन् ।
एभोकाडोमा भएका गुणहरूले शरीरमा क्यान्सरका कोशिकाहरू बन्न दिँदैनन् । अनि फ्री र्‍याडिकलसँग लड्दै यसले क्यान्सरको खतरालाई पनि कम गर्छ । रक्तचापको समस्या भएकाहरूले एभोकाडो अवश्य खानुपर्छ । यसमा भएको पोटेसियमले रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्छ ।
यसले मुटुलाई पनि स्वस्थ बनाउँछ । हृदयघात र मुटुरोगको जोखिम यसले घटाउँछ । यसमा भएको मोनोअनस्याचुरेटेड फाइबर र भिटामिन ईले मस्तिष्क विकास गर्छ । अनि काम गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ । बालबालिकालाई अवश्य पनि एभोकाडो खुवाउनुपर्छ । यसमा भएको पोषक तत्त्वले आँखा स्वस्थ राख्छ । आँखाको तेज बढाउनुका साथै मोतियाविन्दु जस्ता रोग पनि लाग्न दिँदैन ।
शारीरिक सुगठन गर्ने पुरुष र महिलाले एभोकाडोको सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । यसले मांसपेशी र हाड बलियो बनाउँछ र दिनभरि फुर्तिलो अनुभव गराउँछ । दूध र मह मिसाएर एभोकाडो खानुभयो भने दोब्बर काम गर्छ ।
Previous articleगोदावरीले नि:शुल्क स्वाब परीक्षण गर्ने
Next articleयुनाइटेड इदीमर्दी हाइड्रोपावरको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन